Uwe mara mma nke ejiri ọla mmiri mepụta - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Uwe mara mma nke ejiri ọla mmiri mepụta
Metal nwere ezigbo ihe eletriki ma bụrụ ihe dị mkpa eji eme mmepe nke uwe ndị mara mma. Otú ọ dị, na ekweghị ekwe nke igwe n’onwe ya buru nnukwu ibu na enweghị ike imezu ihe uwe chọrọ, yabụ enweghị ike iji ya smart uwe na mpaghara buru ibu.Liquid metal bụ ụdị akwa nke alloy nwere obere agbaze., nke nwere ike idowe usoro mmiri mmiri na ụlọ okpomọkụ. Mgbe mmiri mmiri mmiri jikọtara ya na uwe, enwere ike ịmepụta uwe ndị nwere ọgụgụ isi.
Otu ndi nyocha na mahadum tsinghua emepeala ụzọ ọhụụ iji rụọ igwe eji eme ọmarịcha mmiri, ha nwee ike ịhazi akụkụ buru ibu nke eriri igwe na - acha mmiri na akwa akwa nwere ike ịdụnye ma gbasaa dịka ha nwere mmasị na uwe ahụ., ndi oru nyocha a haziri usoro uwe eji eme mmekorita nke igwe mmadu, nkwalite ikuku, ngosi ngosi mgbanwe na njikwa igwe mmadụ.
A na-eji akwa ndị a na-ejikarị akwa ma ọ bụ kpoo ya na akwa siri ike na-eme ka ọ sie ike ịnweta mmiri mmiri ịgbaso ya., na mbụ, akwa ahụ kpuchie akwa oyi akwa (acinate vinyl (PVAC) film, Ihe nkiri PVAC na-abanye n'ime oghere n'etiti eriri, na akwa elu larịị larịị interface, ma ihe nkiri a nke igwe ihe eji eme ya nwere akwa akwa, a pụrụ ijikọ aka na mmiri mmiri mmiri.
Na mgbakwunye, ihe eji eme mmiri dika mmiri (cu-egain) eji ọgwụ ọla eji doped mee ihe na omumu a. Igwe mmiri a na-adịwanye elu ma na-akpụ akpụ ya nke ukwuu na-eme ka ihe okirikiri ahụ kwụsie ike ọbụlagodi mgbe agbatị ma ọ bụ apịkọta, enwere ike ịgbakwunye ihe nkiri PVAC ngwa ngwa site na igwe mkpuchi.Finally, iji melite nkwụsi ike na mgbochi nke mmiri mmiri mmiri mmiri mmiri mmiri, ndị nyocha ahụ jiri ihe nkiri Ecoflex kpuchie elu igwe mmiri mmiri mmiri iji mezue nchịkọta.
Ndị ọrụ nyocha ahụ gosipụtara ọtụtụ akwa smart mmiri mmiri dabere na teknụzụ. Preparationzọ nkwadebe nke akwa mmiri a siri ike dị ọcha iji rụọ ọrụ ma ọ chọghị ngwa ọrụ dị oke ọnụ ma dị ọnụ.. Ejikọtara ya na ngwaọrụ kọmputa siri ike, ọ nwere ike mepụta igwe eletrọniki na-agbanwe agbanwe na mpaghara buru ibu, nke na-enye azịza ohuru maka mmepe nke uwe ndị eji ewu ewu.
Ihe bara uru nye a "Semi - igwe anaghị agba eletriki igwe eletriki igwe elekere eletriki maka Smart" aha, bipụtara na akwụkwọ akụkọ ACS Appured Materials & Oghere.
Ihe eji eme akwa ulo bu uzo ato nke mmepe
Ibe udiri ihe